Shaqooyin Sharci oo badan oo gudaha Mareykanka ah oo leh fiisooyin H-2B cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Shaqooyin Sharci oo badan oo gudaha Mareykanka ah oo leh fiisooyin H-2B cusub
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Soo-galootiga Mareykanka ayaa hadda u fududaaday kuwa shaqo ka raadsada huteelada, goobaha nasashada, iyo maqaayadaha. Qaybta martigelinta hadda ma awoodo inay bixiso adeegyadii ay bixiyeen kahor masiibada. Dawladda Maraykanku taas way ogtahay oo waxay u furaysaa Maraykanka inay ku casuunto shaqaalaha ajaanibka ah si ay u buuxiyaan shaqooyinka aadka loogu baahan yahay.
Degenaanshaha huteelada ee huteelada iyo goobaha nasashada ee Maraykanka ayaa si tartiib tartiib ah u soo kabanaya xaaladaha qaarkood, laakiin xitaa 50% dadka degan ayaa ah mid aan suurtogal ahayn in ay qabtaan shaqaalaha la shaqeeya.
Goobaha loo dalxiis tago ee Maraykanka sida Hawaii ama Florida, dad badan oo ka shaqayn jiray warshadaha soo dhawaynta, gaar ahaan shaqooyinka fududayn lahaa nadiifinta qolalka huteelada, miiska hore, makhaayadaha, waxay u wareegeen shaqooyin kale ama ka tageen gobollada loo dalxiis tago.
Bixinta adeegyada huteelada ayaa noqonaysa wax caqabad ah, oo aan awoodin in ay fududayso qiimayaasha deggenaanshaha sare.
Ka dib markii Waaxaha Amniga Gudaha iyo Shaqada ee Mareykanka ay ku dhawaaqeen qorshooyin ay ku sameynayaan 20,000 H-2B fiisooyin shaqaale aan beero ahayn oo ku meel gaar ah sanad xisaabeedka 2022, Guddoomiyaha Ururka Hoteelka & Guryaha ee American Chip Rogers ayaa siidaayay bayaanka hoose.
"Ku dhawaaqida maanta waa war la soo dhaweynayo, iyadoo warshadaha hoyga iyo kuwo kale oo badan ay sii wadaan inay la halgamaan suuqa shaqada ee ugu adag muddo tobanaan sano ah. Buuxinta shaqooyinka furan waa mudnaanta koowaad ee warshadaha hoteelka, iyo barnaamijka fiisaha H-2B wuxuu caawiyaa hoteelada iyo warshadaha kale ee leh ganacsi xoog leh oo xilliyeed iyo baahida shaqaaluhu inay sidaas sameeyaan. Iyadoo xubnaheennu ay had iyo jeer eegaan shaqaalaha Mareykanka si ay u buuxiyaan shaqooyinka muhiimka ah xilliyada ugu sarreeya, barnaamijka H-2B wuxuu u adeegaa sidii qalab muhiim ah oo lagama maarmaan u ah ganacsiyadan yar yar si ay u xakameeyaan farqiga shaqada."
The Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA) waa ururka kaliya ee qaranka oo matalaya dhammaan qaybaha warshadaha hoyga ee Maraykanka. Xarunteedu tahay Washington, DC, AHLA waxay diiradda saartaa u doodista istaraatiijiga ah, taageerada isgaarsiinta, iyo barnaamijyada horumarinta xoogga shaqada si ay horay ugu socoto warshadaha. Ka dib faafitaanka masiibada COVID-19, martigelinta ayaa ahayd warshadii ugu horreysay ee saameysay waxayna ka mid noqon doontaa kuwa ugu dambeeya ee soo kabsada.
Paul Anthony ayaa sidaas yidhi wuxuu leeyahay,
Diisambar 25, 2021 at 16:15
Waxaan ahay sawir qaade sideen shaqo uga heli karaa gudaha United States
Sunday jeff elaigwu wuxuu leeyahay,
Diisambar 22, 2021 at 14:28
Waxaan ahay kabalyeeri xirfad leh sidee baan u codsan karaa fadlan